पुल अलपत्र छाडेर ठेकेदार भागेपछि सांसद सिंखडाको यस्तो आक्रोश
धादिङ, ५ मंसिर । धादिङबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसद जगत सिंखडाले पुलको काम नसकी ठेकेदार भागेपछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सांसद सिंखडाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै विकास निमार्णमा हुने लापरवाही र त्यसमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-७ खहरेमा मोटर पुल परेपछि भएको झोलुङ्गे पुल पनि भत्काएको तर काम अलपत्र पारेर ठेकेदार भागेको स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद सिंखडाले ठेकेदारले २० लाख खाएर भागेको र आफूले सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको कुरा संसदमा समेत पटकपटक उठाएको जिकिर गरे ।
यस्तो उनको आक्रोशपूर्ण स्टाटस :
‘कस्तो देश रु कस्तो कर्मचारीतन्त्र रु कस्तो कानून ? हामी कस्ता नेता कार्यकर्ता रु कस्ता मन्त्री ? ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र धादिङ प्रतिनिधि सभा -२ ‘ख’ को त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-७ खहरेमा २०६७ सालमा मोटर पुल निर्माणका लागि बजेट पर्‍यो । भएको झोलुङ्गे पुल पनि भत्काइदियो । वारी र पारी दुवैपट्टि पिल्लर उठायो । त्यसपछि ठेकेदार भाग्यो । अहिलेसम्म न झोलुङ्गे पुल मर्मत छ न त पुल बन्छ ।
स्कूल पढ्ने बच्चाहरु लठ्ठाको सहारामा वारिपारी गर्न बाध्य छन् । त्रिपुरासुन्दरी गापा-६ आगिञ्चोकमा बाटो स्तरोन्नतिका लागि २ वर्ष अगाडि १ करोड २० लाखको टेन्डर पर्‍यो । ठेकेदार २० लाख बुझेर फरार छ । मैले चुनाव पछाडि सडक विभाग सडक डिभिजन कार्यलयमा पटक-पटक भनेँ । सदनमा तीनपटक कुरा उठाइसकेँ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेँ । कतैबाट केही हुँदैन । फेरि पनि भन्छु, भनिरहन्छु । सरकार ! यस्ता प्रवृत्ति भएका भ्रष्टहरुलाई तुरुन्त छानबिन गरी करबाहीको कठघरामा ल्याइयोस् ।
Tagsजगत सिंखडा धादिङ